बदनाम अनुहारलाई इक्यान फेयरको जिम्मा ! — Motivatenews.Com
बदनाम अनुहारलाई इक्यान फेयरको जिम्मा !
काठमाडौं – इभेन्ट म्यानेजमेन्टमा असफल सावित भएको बदनाम कम्पनी वल्र्ड विजनेश म्यानेजमेन्ट एण्ड कन्सल्टेन्ट (डब्लुविएमसि)ले इक्यान एजुकेशन फेयरको जिम्मा पाएको छ । बदनाम कम्पनीले फेयरको जिम्मा पाएपछि कन्सल्टेन्टहरु असन्तुष्ट छन ।
विगत लामो समयदेखि इक्यान एजुकेशन फेर गर्दै आएको वान अप कम्युनिकेशनले केही बर्ष अघिदेखि विवाधका कारण काम गर्न छोडेपछि आर्थिक चलखेल हुन थालेको भन्दै इक्यानियनहरु असन्तुष्ट भएका हुन ।
लाखौँको आम्दानी हुने अर्वोड स्टडिको लागि सबैभन्दा ठुलो शैक्षिक मेलामा टेन्डर पार्नका लागि चलखेल भएको आशंका छ । विगतदेखिनै असफलता झेल्दै आएका इक्यानकै सदस्य बुद्धि प्रसाद रेग्मीको कम्पनीले टेन्डर पाएपछि इक्यानियनहरुले चलखेलको आशंका गरेका हुन । इक्यानका अध्यक्ष विष्णुहरी पाण्डेका विश्वास पात्र बुद्धिप्रसाद रेग्मीको असफल कम्पनीले टेन्डर पाउनमै शंका उत्पन्न भएको भन्दै एक कन्सल्टेन्सी व्यवसायीले शैक्षिक मेलाले दिने परिणामकै विषय पनि शंका ब्यत्त गरे ।
यहि असार २६ गतेदेखि २९ गतेसम्म १३ औं इक्यान एजुकेशन फेयर हुँदैछ ।
डब्लुविएमसि कसरी असफल ?
वल्र्ड विजनेश म्यानेजमेन्ट एण्ड कन्सल्टेन्ट (डब्लुविएमसि) नामक कम्पनी पटक पटक असफलता झेल्टै आएको संस्था हो । असफलता मात्र हैन उक्त कम्पनीले बदनामी पनि उक्तकै पाएको छ । नेपाल लगायत विश्वभर इभेन्ट म्यानेजमेन्टको काम गर्दै आएको उक्त कम्पनीले नेपालमा भन्दा पनि अमेरिकामा बढि काम गर्दै आएको थियो ।
इभेन्टको नाममा नेपालीलाई अमेरिकामा लगेर भगाउने गिरोहको रुपमा काम गर्दै आएका कम्पनीका संचालक बुद्धिप्रसाद रेग्मीले दलालको काम गरेको समाचार विभिन्न मिडियामा आएपछि उनको यो धन्दा चौपट भएपछि उनी नेपाल आएका थिए । उनी नेपालीहरूलाई बिभिन्न मेला र मोहत्सवमा सहभागी गराई त्यहिबाट भगाउने काम गर्ने भएको सार्वजनिक भएपछि करोडौं लगानी डुवाएर उनी नेपाल फर्केका हुन ।
नेपालीलाई बिभिन्न व्यवसायीक तथा सास्कृतिक कार्यक्रममा अमेरिकाले सहजै भिषा दिने भएकाले उनी मानब तस्कर जस्तो जघन्य अपराध गर्दै आएका थिए । अमेरिकामा बेलाबेलामा नेपाली उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न र नेपाली कला सांस्कृतिको सम्बर्द्धन गर्न भनेर धेरै किसिमका कार्यक्रमहरू हुने गर्दछन् । त्यहि कार्यक्रममा कलाकार तथा व्यवसायिलाई सहभागी गराउने र त्यहिंबाट २० लाखसम्म नेपाली रुपैयाँ लिई भगाउने काम गर्दै आएका थिए ।
छिट्टै अरव पति बन्नका लागि आयोजना गरेको ‘नेपाल एक्जिवेशन एण्ड इन्टरनेशनल टे«ड सो’ नामक उक्त कार्यक्रमका समाचार सार्वजनिक भएसंगै ब्यबसायी तथा कलाकारहरुको सहभागिता नहुने देखेपछि उनले उक्त कार्यक्रम रद्द गरि नेपाल फर्किएका थिए । केहि बर्ष काठमाडौँको पुतलीसडकमा बसेर विद्यार्थीलाई परामर्श दिदै आएका एसविएससी कन्सल्टेन्सीका संचालक बुद्धि प्रसाद रेग्मी अमेरीका छिरेसंगै अरव पति बन्न लागेका थिए तर मिडियाले उनको अरवपति बन्ने सपना चक्नाचुर बनाइदिएका थिए ।
उनको अर्को कर्तुत के थियो भने उद्योग वाणिज्य महाँसंघको अनुमति विना नै कार्यक्रमको चाँजो पाँन्जो मिलाइएको थियो । तर उनले नक्कली डकुमेन्ट बनाइ उद्योग वाणिज्य महाँसंघको पनि अनुमति रहेको भन्दै प्रचार गरेका थिए । उक्त कार्यक्रममा उनले करिव चार सय नेपाली भगाउने योजना बुनिसकेका थिए । उनले त्यो कार्यक्रम भन्दा अघि धुर्मुस सुन्तली लगाएतको टिमलाई अमेरीकामा लगेर कार्यक्रम गरिसकेका थिए । त्यो कार्यक्रम पनि उनका लागि असफल सावित भएको थियो । अमेरिकामा कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो भने त्यही कार्यक्रम चलिरहेकै वेलामा नेपालमा भुकम्प गएको थियो । पहिलो गासमै ढुङ्गा लागेपछि हत्उत्साहित भएका रेगमीले उद्योग वाणिज्य महासंघको अनुमति विनानै नक्कली डकुमेन्ट बनाए सबैलाई चकित पारेका थिए ।
न्यूवर्कमा गर्ने लागिएको नेपाल एक्जिवेशन एण्ड इन्टरनेशनल टे«ड सो असफल भएपछि करोडौं डुवाएर आँसुपुच्दै आफ्नै देश ठिक भनेर नेपाल आएका उनले इक्यान फेयरमा पनि अध्यक्ष पाण्डेलाई प्रभावमा पारेर डेन्डर हत्याउँदै कार्यक्रमको तयारीमा जुटेका छन । आजसम्मका कार्यक्रमबाट असफल सावित भएका रेग्मी १३ औं इक्यान फेयरमा के गर्छन त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
पत्रकार भन्दै दलाली
इक्यान फेयरका विषयमा कुरा गर्दा आफू पनि पत्रकार भएको र पत्रकारहरु इथिक्समा बस्दा राम्रो हुने भन्दै उक्त कम्पनीका अध्यक्ष बुद्धिप्रासद रेग्मीले धम्किसमेत दिएका छन । मोटिभेट न्युजसंग कुरा गर्दै उनले आफू पनि विगत लामो समयदेखि पत्रकारीतामा रहेको र आफूले सुचना विभागले दिने रातो कार्डसमेत बोकेर डिड्ने गरेको बताएका छन ।
यसरी दलालहरु पनि पत्रकारको कार्ड बोक्न थालेपछि पत्रकारीताको धार कतातिर जाला यो मनन योग्य विषय हो । पत्रकारको नाममा खुलेयान दलाली गर्दै मानव तल्करको रुपमा काम गर्नेलाई सरकारले छानविन गरि तुरुन्त कानुनको दायरा ल्याउनु आवश्यक छ । इक्यान फेयरका विषयमा थप विवरण आगामी अंकमा प्रस्तुत गर्दै जानेछौं ।
२०७६ असार २३ गते प्रकाशित